प्रहरी कर्मचारीलाई बढुवा हेर्ने डिएसपीबाट कर्मचारीहरुनै आतंकित ! | CNNepal
प्रहरी कर्मचारीलाई बढुवा हेर्ने डिएसपीबाट कर्मचारीहरुनै आतंकित !
अन्तर समझ,काठमाडौं । शिर्षक पढेर तपाई छक्क पर्नु भए होला ? छक्क नपर्नुहोस । यस्तै खबर छ ।
नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई बढुवा हेर्ने एक डीएसपीबाट प्रहरी कर्मचारीहरुनै आतङ्कित बनेको खबर छ ।
असईबाट सेवामा प्रबेश गरेका तनहु घर भएका डीएसपी सुवास बोहोराको प्रशासनमा फुर्ती फार्ती देख्ने बित्तिकै थाहा लाग्छ उनीको रवैया कस्तो छ भने र । उनकै ब्याजीका डीएसपीहरु समेत उनको चर्तिकला देखेर चकित मात्रै भएका छैनन् । जिब्रो टोक्न वाध्य भएका छन् ।
पछिल्लो समय उनले सधै आफ्नै बखान गरेर कार्यलय समयको दुरुपयोग गरेका छन् । आफूले आफुलाई १ नम्बरको एसपीको ताबेदारी प्रस्तुत गर्छ्न। म जत्तिको प्रहरीमा को छ भन्न समेत भ्याउने गरेको सुनेर हैरान हुनेहरुको जमातै छ ।
यस भन्दा अगाडिको एसपी बढुवा हुदा पनि आफू पर्ने ग्यारेन्टी भएको किनकी आफुले प्रधान सेनापती पुर्णचन्द्र थापाबाट वचन पाइसकेको भन्दै गड्डी हाक्दै हिड्थे तर उनको त्यतिखेर कतै चर्चासमेत सुनिएन। फेरि पनि अहिले उस्तै फुर्ती बढेको छ स्रोत भन्छ ।
त्यसो त किनकी उनि भन्दा सिनियर अझै १०० जना डिएसपी बढुवाको पर्खाइमा छन् । बाकीनै छ उनीहरुको बढुवा हुन् । डीएसपी सुवास बोहोरालाई एसपी हुन्, प्रहरी बढुवा प्रणालीको ऐनबाट जादा अझै २ वर्ष लाग्छ । बढुवामा त्यही भएर पनि नपरेका हुन् ।
तर शक्तीको रवाफ देखाउन भने छाडेका छैनन् । उनको रवैयाको असर तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई परेको छ । असई बाट सई हुँदा सिनियरलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा ६४,६५ सालको असईलाई पन्छाएर ६९ सालको असईलाई सई बनाउने काम उनकै पहलमा गरियो ।
५ बर्ष सिनियर हुँदा पनि आफू नपरेपछी किन नभएको बढुवा भनी सोध्न जाने हरेकलाई उनले दादागिरी सहित जबाफ दिएर फर्काउदै आएका छन् । म कसरी एसपीमा छुटे तिमिहरु पनि त्यसरीनै छुटेउ ।
जो पर्न पनि सक्छ । जो पनि छुट्न सक्छ भन्ने उनको जबाफले के प्रहरी संगठन सिस्टममा चल्दै छ ? यस्ता हचुवा प्रश्न जन्माएर उनको दादागीरी मच्चिएको छ ,बढुवामा छुटेका असईले नाम नबताउने शर्तमा गुनासो पोखे ।
आईजीपी सवेन्द्र खनालसर ले कस्ता मान्छे राख्नु भाको रहेछ यो शाखामा आफ्ना गुनासा पोख्न समेत पाइदैँन ? गुनासो गर्न जानेलाई सम्झाउनुको साटो उल्टै हप्काएर पठाउछन्। न्याय खोज्न कहाँ जाने ? यस्तो घमण्ड भएको डिएसपी जागिर खाउन्जेल काही कतै नदेखेको पिडितहरु भन्छन्।
आफू त्यति खेर रक्तचन्दन चल्दाको समय खानिखोला,लाइन चल्दा धनुषाको खजुरा बसी अकुत कमाए । स्वयम्भू , टोखा र चितवनमा जग्गा जोडी भ्रष्टाचार गरेको भनी त्यति खेरै इनिस्पेक्टरबाट डीएसपी बन्दानै छुटाइएका थिए ।
कमजोर कमान्डका कारण कालिकोटमा म्यादी प्रहरीले आन्दोलन गरि १ जना म्यादीको मृत्यु भएपछी उनलाई कार्वाही भएको थियो तर तत्कालिन एसएसपी रमेश खरेल नेतृत्वको समितीले उनी पहिला संगै बसेकै कारण उनलार्इ चोख्याएका थिए। उनी अहिले पनि तिनै खरेल साप ठिक भन्न भ्याउछन् ।
उनी खरेलका भक्तका रुपमा चिनिन्छन् । भ्रष्ट र कमजोर कमान्डका डीएसपी बोहोरा अहिले प्रधान सेनापती र आईजीपी खनालको गाँउले भन्दै तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई आतङ्कित पार्दै आएका छन् र उनिहरु भन्दै छन् यस्ता हाकिम भए सम्म न्याय कहिल्लै पाइदैन।
यस्तालाई कस्ले कार्बाही गर्ने । आफु एसपीमा बढुवा नभएको पीडा तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई देखाउँदै छन्।
जबकी उनको बढुवामा पालोनै आएको छैन् । उनी अरु भन्दा धेरै जुनियर प्रहरी अधिकारी हुन्। उनलाई शक्ती केन्द्र र कुनै हाकिमले गलत किसिमले धाप नमारेको अबस्थामा र प्रहरी ऐन चल्ने हो भने उनी अझै २ बर्ष पालोनै आउँदैन।
उनले त अहिले शाखामा बसेर तान्डवनै प्रर्दशन गरेका छन् । त्यती मात्र कँहा हो र ? यस्ता विवादित डिएसपी भन्दा धेरै इमान्दार र सक्षम प्रहरी अधिकारी उनी भन्दा माथी छन् । अभियान टाइम्सबाट साभार ।
Previous articleविषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी नल्याउनू : सर्वोच्च
Next articleसशस्त्र प्रहरीका जवान लागुऔषध सहित पक्राउ
चाडवार्ड नजिकिदै गर्दा खाद्यन्न विभागको अनुगमन सुरु